अमेरिकामा वृत्तचित्र 'इन्डियाज डटर' को प्रदर्शन हुने- विश्व - कान्तिपुर समाचार
अमेरिकामा वृत्तचित्र 'इन्डियाज डटर' को प्रदर्शन हुने
फाल्गुन २४, २०७१ बीबीसी
वासिङ्टन — सन् २०१२ को १६ डिसेम्बरमा दिल्लीमा भएको सामूहिक बलात्कारमाथि आधारित वृत्तचित्र 'इन्डियाज डटर' को अर्को साता अमेरिकामा पि्रमियर हुने भएको छ ।
वृत्तचित्रप्रति समर्थन जनाउन पि्रमियरमा अस्कर विजेता हलिउड अभिनेत्री मेरिल स्टि्रप र फ्रिडा पिन्टो पनि सहभागी हुँदैछन् ।
बारुच कलेज अफ दि सिटी युनिभर्सिटी अफ न्युयोर्कमा ९ मार्चमा यसको प्रदर्शन हुनेछ । एक गैरसरकारी संस्था भाइटल भ्वाइसेज ग्लोबल पार्टनरसिप एन्ड चिल्ड्रेन्स डेभलपमेन्ट अर्गनाइजेसन प्लान इन्टरनेसनलले यसको प्रदर्शन गराइरहेको छ । स्ट्रिप र पिन्टो उक्त संगठनको कार्यक्रम 'किनकि म केटी हुँ ?' को ग्लोबल एम्बेसडर हुन् ।
स्क्रिनिङको क्रममा वृत्तचित्रकी निर्देशक लेज्ली उडविन पनि उपस्थित रहने छन् । 'दुई वर्षसम्म श्रीमान र दुई सन्तानलाई छाडेर भारतमा बसे, यसको निर्माण गरेँ,' उनले भनिन् । उक्त बलात्कारको भयंकर रूपभन्दा आमजनताको विरोध प्रदर्शनले यसको निर्माणका लागि आफूलाई प्रेरित गरेको उनले बताइन् ।
'सरकारको कठोर कारबाहीमा अश्रुग्यास प्रहार, लाठी चार्ज र पानीको फोहोरा सामेल थियो, त्यसको पर्वाह नगर्दै दिनभर उल्लेखीय संख्यामा नागरिकले प्रदर्शन गरिरहेका थिए,' उनले भनिन्, 'उनीहरूले मेरो र सम्पूर्ण महिला अधिकारका लागि प्रदर्शन गरिरहेका थिए, त्यसले मेरो मनमा आशा जगायो, कुनै अन्य मुलुकमा यस्तो भएको मलाई सम्झना छैन ।'
एनजीओकी उपाध्यक्ष सिन्डी डायरले सबैले उक्त वृत्तचित्र अवश्य हेर्नुपर्ने बताइन् । 'पूरा विश्वले यस सहासिक र बुद्धिमानी कार्यको प्र्रशंसा गर्नुपर्ने हो, यो भारतको मात्र नभएर सबैतिरको कथा हो,' उनले भनिन् । अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवसको अवसरमा स्विटजरल्यान्ड, नर्वे र क्यानाडासहित विश्वभर यसको प्रदर्शन हुनेछ ।
यता भारतमा भने यस वृत्तचित्रको विरोध जारी छ । बार काउन्सिल अफ इन्डिया (बीसीआई) ले बलात्कारमा दोषी ठहर गरिएकाहरूको दुई वकिललाई शुक्रबार अबेर राति 'कारण देऊ' नोटिस जारी गरेको छ । ती दुईजनामाथि महिलाविरुद्ध अमर्यादित प्रतिक्रिया दिएको आरोप छ । 'उक्त वृत्तचित्रमा महिलाविरुद्ध अमर्यादित टिप्पणी गर्ने एमएल शर्मा र एपी सिंहलाई कारण देऊ नोटिस जारी गरेका छौं,' बीसीआई अध्यक्ष मननकुमार मिश्राले भने ।
वकिल शर्माले आरोप अस्विकार्दै आफूले केही गलत नगरेको र कुनै पनि खाले नोटिस नपाएको बताएका छन् । उक्त सामूहिक बलात्कारमा दोषी ठहरिएपछि फासीको सजाय पर्खिरहेका अभियुक्त मुकेश सिंहको उनी वकिल हुन् । दुवै वकिलले सन्तोषजनक जवाफ नदिएमा उनीहरूको लाइसेन्स खारेज गर्ने बीसीआईले भनेको छ । शर्माले भने, 'मैले मात्र महिलाको सुरक्षा र बचाऊबारेमा बोलेको थिएँ ।' अर्का वकिल एपी सिंहले पूर्वाग्रह वा पक्षपातग्रस्तहरूले यसको विरोध गरिरहेको बताए । बेलायतमा प्रसारण भइसकेको उक्त वृत्तचित्रमाथि भारत सरकाले प्रतिबन्ध लगाएको छ ।
उक्त वृत्तचित्रमाथि उठेको विवादले अन्तर्राष्ट्रिय मिडियामा पनि राम्रै चर्चा पाएको छ । प्रतिबन्ध लगाइए पनि ठूलो संख्यामा भारतीयले यो वृत्तचित्र हेरिरहेको अमेरिकी पत्रिका 'न्युयोर्क टाइम्स'ले लेखेको छ । भारतीय अधिकारीका लागि यसलाई रोक्नु पहिलो प्राथमिकता भए पनि सामाजिक सञ्जालको युगमा यो सम्भव नभएको अमेरिकाकै दोस्रो ठूलो पत्रिका वासिङ्टनले भनेको छ । यसमा प्रतिबन्ध लगाएर भारत सरकारले बलात्कार र महिला विरोधबीचको सम्बन्धलाई बुझ्न नचाहेको देखिएको बेलायती पत्रिका 'गार्डियन' ले सम्पादकीयमा लेखेको छ ।
बेलायतकै अर्को समाचार पत्र 'द इन्डिपेन्डेन्ट' ले भारतका जनता लिंगभेदलाई लिएर समाजको वास्तविकता बुझ्न तयार भए पनि त्यहाँका राजनेताहरू बुझपचाउन खोजेको तर्फ औंल्याएको छ । 'वृत्तचित्रमाथिको प्रतिबन्धले सरकारको प्राथमिकता धेरै गलत भएको देखाउँछ,' पत्रिकाले लेखेको छ । विशेषज्ञहरू वृत्तचित्रमा प्रतिबन्ध लगाउने विषयमा विभाजित रहेको चीनको पत्रिका 'चाइना डेली' ले लेखेको छ । वृत्तचित्रमा प्रतिबन्ध लगाउनुभन्दा न्यायालयले बलात्कारजस्तो मुद्दाको चुस्त र दुरुस्त न्याय सम्पादनमा जोड दिनुपर्ने एक वर्गको मान्यता छ । पीडित परिवारले विरोधको राजनीतिभन्दा न्यायको पर्खाइमा रहेको भनेको छ ।
प्रकाशित : फाल्गुन २४, २०७१ ०८:२८
किन मारिन्छन् पुटिनविरोधी ?
नेम्त्सोभ हत्या प्रकरण
फाल्गुन २४, २०७१ जितेन्द्र साह
काठमाडौं — रुसका प्रभावशाली विपक्षी नेता ५५ वर्षे बोरिस येफिमोभविच नेम्त्सोभको गत २७ फेब्रुअरीमा हत्या भयो । राजधानी मस्कोको पनि सबभन्दा सुरक्षित मानिने क्रेमलिन वाल र रेड स्क्वायर नजिकैको मस्कभोरेत्स्की पुलमा उक्त घटना भएको थियो ।
छ्याप्त छ्याप्ती सीसीटीभी क्यामेरा भएको उक्त क्षेत्रमा उनको महिला मित्र भने जोगिइन् ।
सुरुआतमा धेरैले ती महिला उनकै दलका सहयोगी वा कार्यकर्ता होलिन् भन्ने अनुमान गर्‍यो । मस्को प्रहरीले तत्कालै उनलाई नियन्त्रणमा लिएर पाँच दिनसम्म थुनामा राखेपछि बल्ल हल्लीखल्ली भयो । नेम्त्सोभको हत्यापछि एकाएक चर्चामा आएकी उनी २३ वर्षे युक्रेनी मोडल अन्ना दुर्यत्स्का हुन् । आफूभन्दा अढाइ गुणा बढी उमेरका रुसी वैज्ञानिक, राजनीतिज्ञ र उदारवादी नेता नेम्त्सोभकी यी प्रेमिकाको यसअघि कुनै चर्चा भएको थिएन । उनले तीन वर्षदेखि नेम्त्सोभसँग सम्बन्ध रहेको खुलाइन् ।
राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनका कट्टर आलोचक नेम्त्सोभ र अन्नाबीचको सम्बन्धको सार्वजनिकीकरण सबैका लागि रोचक विषय बन्यो । नेम्त्सोभ हत्याको बेला पूर्वी युक्रेनको युद्धमा रुसको संलग्नता र पश्चिमा प्रतिबन्धले उत्पन्न वित्तीय संकटको विरोधमा र्‍याली गर्न मस्को आएका थिए । र्‍यालीको आह्वान गर्नु अगाडिदेखि उनले पुटिनले आफ्नो हत्या गराउने शंका पनि व्यक्त गरेका थिए । उनी त्यतिबेला पूर्वी युक्रेनका विद्रोहीसँग रुसी सैनिकको संलग्नता झल्काउने प्रतिवेदन तयार पार्नमा व्यस्त थिए ।
पुटिन सरकारका प्रतिनिधिहरूले उनलाई मारेर केही हात नलाग्ने र कसैलाई फाइदा नपुग्ने भन्दै आरोपको खण्डन गर्‍यो । उक्त घटनामा अस्थिरता फैलाउने तत्त्व, चेचन विद्रोही, अतिवादी इस्लामिक समूह वा हत्या गरी हिँड्ने सडकछाप अपराधीको संलग्नता हुन सक्ने रुसी सुरक्षा अधिकारीहरूले औंल्याए ।
पुटिन नियन्त्रित सम्पूर्ण रुसी मिडिया तथा सारा सुरक्षा संयन्त्र सीसीटीभी फुटेज र अन्नाको बयानमा केन्दि्रत भयो ।
मस्कोबाट टाढाको एक प्रान्तीय सहर यारोस्लाभलमा भ्रष्टाचारविरोधी अभियानका कारणले वाहीवाही पाएका नेम्त्सोभका थुप्रै शत्रुहरू भएको प्रहरी अधिकारीहरूको तर्क छ । कडा सुरक्षा प्रबन्ध भएको मस्कोको उक्त क्षेत्रमा कसैले उनलाई मार्ने जोखिम किन मोल्छ ? भन्ने प्रश्न तेर्सिएकै छ ।
महिलाबीच निकै लोकपि्रय नेम्त्सोभका लागि प्रशंसकहरूले समेत स्त्रीलम्पट वा व्यभिचारी विशेषणको प्रयोग गर्न हिच्किचाउँदैनन् । निकै कुशल र उदारवादी नेताको छवि भएका नेम्त्सोभकी महिला मित्रहरूको सूची निकै लामो बताइन्छ । राजनीतिक प्रतिस्पर्धाका कारणले सबैले पुटिनमाथि शंका गरे पनि स्त्रीसँगको सम्बन्ध त उनको हत्याको कारण होइन ? भन्नेतर्फ पनि छानबिन मोडिएको छ । नयाँ प्रेमिका अन्नासँगको निकटताका कारण इष्र्यावश कुनै अन्य महिला साथीले पेसेवर हत्यारा पठाएर पनि उनलाई मार्न लगाएको सम्भावना व्यक्त गरिएको छ ।
हुन त उनी स्त्रीमोहमा परेका पहिलो रुसी नेता होइनन् । वैवाहिक जीवनमा असफल तर पटकपटक राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको दायित्व सम्हालेका ६२ वर्षे पुटिन पनि ३२ वषर्ीया खेलाडी तथा राजनीतिकर्मी अलिना माराटोभना काबेभासँगको सम्बन्धलाई लिएर विवादमा आइसकेका छन् ।
अहिलेको घटना अलि फरक खालको छ । अनुसन्धानकर्ताहरूले अन्ना मुख्य प्रत्यक्षदर्शी भएको, त्यसअघि र पछि भएका शंकास्पद गतिविधिबारे उनलाई जानकारी हुनुपर्ने दाबी गरेका छन् । ढाडतिरबाट गोली प्रहार गरिएको हुनाले हत्याराको अनुहार चिन्न नसकेको उनले बताइन् । उनले आफूले थाहा पाएजति सूचना प्रहरीलाई दिएको बताएकी छन् । हिरासतमा राख्ने कुनै आधार नभेट्टाएपछि प्रहरीले अन्नालाई नेम्त्सोभको अन्तिम संस्कारकै दिन ३ मार्चमा छाड्नुपर्‍यो । उनी अन्त्येष्टिमा सहभागी नभई युक्रेनको राजधानी किभस्थित आमाकोमा पुगिन् ।
अन्नासँग एक रेस्टुरेन्टबाट खाना खाएर फ्ल्याटतर्फ पैदलै गइरहेको बेला नेम्त्सोभमाथि कटुवा पेस्तोलबाट अन्धाधुन्ध गोली प्रहार भएको थियो । अन्नाले तत्कालै प्रहरी र आमालाई यसबारे खबर गरेकी थिइन् । नेम्त्सोभको हात समाइरहेको बेला अन्नाले गोलीको आवाज सुनेको आमाले बताएकी छन् ।
'बोरिस झुक्दै लडे, अन्ना निकै डराएकी थिइन्, उनले मलाई र प्रहरीलाई लगातार फोन गरिन्,' आमाले भनिन् । अन्नाले फोनमा भनेको दोहोर्‍याउँदै उनले भनिन्, 'आमा, बोरिस मारिए, ऊ मेरो छेउमा पल्टिरहेको छ ।' अन्नाले आफ्नो एक साक्षात्कारमा प्रहरीले आफूसँग बयान लिएको, सबै सामग्री र फोन कल्सको जाँच गरेको सफाइ दिइसकेकी छन् । अन्नालाई पनि हत्याको धम्की आएको छ । उनको जीवनरक्षाका लागि आवश्यक सुरक्षा मापदण्ड अपनाइएको युक्रेनी अधिकारीले जनाएका छन् ।
पूर्वी युक्रेनमा जारी युद्धमा रुसको हात भएको बारे नेम्त्सोभसँग प्रमाण भएकोले उनलाई सिध्याइएको युक्रेनी पक्षको दाबी छ । सन् १९९० को राजनीतिक परिदृश्यमा युवा सुधारकका रूपमा उदाएका ऊर्जावान् र प्रजातन्त्रप्रति लगाव भएको व्यक्तित्वको रूपमा जनताले निम्त्सोभलाई सम्झिन्छन् । पुटिनविरोधीको हत्या भएको यो पहिलो घटना भने होइन । २००३ को १७ अपि्रलमा सुधारवादी राजनीतिज्ञ ६५ वर्षे सर्गेई युसेन्कोभको मस्कोको घरनजिकै हत्या भयो । डिसेम्बर २००३ को संसदीय निर्वाचनमा सहभागी हुन लिबरल रसिया पार्टी दर्ता गराएको केही घन्टा नबित्दै उनी मारिएका थिए ।
त्यही वर्षको जुलाईमा खोजी पत्रकार ६५ वर्षकै युरी सेचेकोचिखिनको १६ दिनको रहस्यमय रोगपछि ३ जुलाई २००५ मा मृत्यु भयो । उनले यसको केही दिनअघि मात्र अमेरिकाको संघीय जाँच ब्युरो (एफबीआई) सँग बैठक गर्ने भएका थिए । १९९९ को सेप्टेम्बरमा रुसमा २ सय ९३ को ज्यान गएको बम विस्फोट र भ्रष्टाचारमा रुसको संघीय सुरक्षा सेवा (एफएसबी) को संलग्नता भएको उनले रिपोर्ट सार्वजनिक गरेका थिए । उक्त हत्यालाई राजनीतिक रूपले प्रेरित भनिएको थियो ।
सन् २००४ को जुलाईमा मस्को गल्लीमा गुडिरहेको कारबाट गोली प्रहार गरिएका फोर्बस म्यागजिनको रुसी सम्पादक अमेरिकी नागरिक ५१ वर्षे पोल क्लेबनिकोभको अस्पतालमा मृत्यु भएको थियो । २००६ को ७ अक्टोबरमा अर्का खोजी पत्रकार ५८ वषर्ीया अन्ना पोलिटकोभ्सकायाको आफ्नै मस्कोट अपार्टमेन्टबाहिर हत्या गरिएको थियो । उनी १९९९ को २६ अगस्टमा रुसले गरेको चेचेन युद्ध र पुटिनको क्रियाकलापविरोधी थिइन् ।
त्यही वर्षको नोभेम्बरमा लन्डन होटलमा विषाक्त चिया खाएर बिरामी परेका पूर्वरुसी जासुस ५३ वर्षीय अलेक्जान्डर लिटभिन्कोको तीन सातापछि मृत्यु भएको थियो । संगठित अपराधको समाधानमा कुशल उनी रुसी सुरक्षा संस्था एफएसबीका भगौडा थिए । उनी र उनका सहकर्मीहरूले आफ्ना हाकिममाथि सार्वजनिक रूपले रुसी टाइकुनहरू र शक्तिशाली सरकारी अधिकार तथा व्यापारी बोरिस बेरेजोभ्स्कीको हत्याको आदेश दिएका आरोप लगाएका थिए ।
कर्तव्य र जागिरको दायराभन्दा बाहिर गएको आरोपमा धेरैपटकको पक्राउ र कारबाहीमा परेपछि उनी परिवारसहित भागेर २००० पछि लन्डन पुगेका थिए । उनले त्यहाँ पत्रकार, लेखक र बेलायती गुप्तचर सेवाका लागि काम गरेका थिए । उनले रुसी गुप्तचर सेवाहरूमाथि पुटिनलाई शक्तिमा ल्याउन बम विस्फोट र आतंकवादका घटना गराउने गरेको आरोप लगाएका थिए । पुटिनले नै पत्रकार अन्ना पोलिटकोभ्सकायालाई मार्ने आदेश दिएको उनले दाबी गरेका थिए ।
२०१३ को मार्चमा रुसका शक्तिशाली व्यक्तित्व तथा पुटिन आलोचक ६९ वर्षे बोरिस बेरेजोभ्स्की बेलायतस्थित घरमा मृत फेला परे । तर पुटिनको १५ वर्षको कार्यकालमा नेम्त्सोभको हत्यालाई लिएर सबभन्दा बढी अन्तर्राष्ट्रिय चासो छ । युक्रेनमा हस्तक्षेपलाई लिएर रुसप्रतिको पश्चिमा रिस पनि जोडिएको छ । नेम्त्सोभले युक्रेन युद्ध प्रकरणमा लगातार पुटिनको राजीनामा माग गरेका थिए ।
पुटिनविरोधीहरूको हत्याको सूची बढ्दै गएको छ । तर अहिलेसम्म कुनै पनि हत्याको पूर्ण एवं सफल अनुसन्धान हुन सकेको छैन । घटनामा प्रत्यक्ष संलग्न केहीलाई पक्राउ पनि गरिएर कारबाही पनि चलाइयो । तर अहिलेसम्म पेसेवर हत्यारालाई मार्ने आदेश दिनेको खुलासा भएको छैन ।
१९९१ मा राजनीतिमा आउनुघि पुटिन पूर्वसोभियत संघको सुरक्षा निकाय केजीबीमा १६ वर्ष काम गरेका थिए । उनले लेफ्टिनेन्ट कर्नेलको पदसम्म पुग्दा गुप्चतर निकायमा राम्रो पकड बनाएका थिए । ती निकायका भ्रष्ट अधिकारी, उनीहरूको व्यापारमा लगानी र उनीहरूले निहीत स्वार्थमा गर्ने व्यापारी हत्या एवं पक्राउबारे पुटिनले राम्रो जानकारी राख्छन् ।
पोल खुल्ने र मनपरी रोकिने त्रासका कारणले पुटिन सत्ताबाहिर वा भित्र रहँदासमेत उनीहरू उनीप्रति बफादार रहन्छन् । प्रजातन्त्रमा कुनै सम्झौता नगर्ने उदारवादी नेता सत्तामा आएमा ती गुप्तचर निकायको धन्दा बन्द हुन सक्छ र थुप्रै अधिकारीहरू जघन्य मुद्दामा कारबाहीमा पर्न सक्छन्् । यस्तोमा उनीहरू पुटिनलाई शक्तिमा राखिराख्न र खुसी पार्न उनीविरुद्ध आवाज उठाउनेको चलाखीपूर्ण ढंगले हत्या गर्दै आएको आलोचकहरू बताउँछन् ।
प्रकाशित : फाल्गुन २४, २०७१ ०८:२६
क्षतिपूर्ति सम्झौताविरुद्ध पूर्व यौनदासीहरू
के चाओ एनलाई समलिंगी थिए ?
यसपालि उग्र बन्दै अलनिनो
इरानद्वारा क्षेप्यास्त्र परीक्षण
नेपाली महिलाले रेलको शौचालयमा जन्मिएकी बच्ची ट्रयाकमा खसिन्, सकुशल
नयाँ वर्षमा बेल्जियम हान्ने योजना, २ पक्राउ